MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA EE LOO YAQAAN 'ST. WEILER DOG' - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha ee loo yaqaan 'St. Weiler Dog'
Rottweiler / Saint Bernard Dogs Nooc Isku Daran
Madison the St. Weiler (Rottweiler / St. Bernard iskutallaabta) markay tahay 2 sano jir
St Weiler ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Rottweiler iyo Saint Bernard . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = St. Weiler
Diiwaangeliyaha Taranka Naqshadeeye = St. Weiller
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynta = Saint Weiler
Diiwaanka Canine-ka Caalamiga ah ee naqshadeeye®= Saint Weiler
'Coosa waxay ahayd ilmo yar oo 3 bilood jir ah oo la qabtay markii aan ka helay hoygeena eyga maxalliga ah. Waxay iga xaday qalbigayga. Waxay laheyd maqaar wejiga qaawan waxayna leedahay cago waaweyn. Waqtigaas, wax fikrad ah kama qabin waxa ay ahayd taranta. Dhakhtarka xoolaha ayaa soo jeediyay inay leedahay xoogaa Mastiff ah oo ay lajoogto Labrador. Waan awooday inaan keeno gurigeeda hal usbuuc kadib maxaa yeelay cidina uma soo galin inay sheegato. Waxay miisaankeedu ahaa 38 rodol, weli waxay lahayd ilka ey ey dhakhtarka xoolaha ayaa ii sheegay inay qiyaastii tahay 3 bilood. Waxay qabatay kormeer caafimaad, qubays, dhowr tallaal, ugu dambayntiina waa la microchipped oo la sii daayay. Hadda miisaankeedu waa 92 rodol, waana qayb ka mid ah qoyskeenna laba sano jir.
Waxaan adeegsaday falsafada Cesar Millan markaan tababaranayay. Laga soo bilaabo maalinti koowaad, taasi waa intaan isticmaalay oo waxay noqotay qofka ugu dad soocashada badan, dadka jecel, eeyaha jecel, dulqaadka bisadda, eeyga weyn ee adag ee aan abid soo maray. Waxay nala soo xiriirtaa sidii inay aamminsan tahay inaan fahamno iyada. Waxay jecel biyaha alaabta lagu ciyaaro oo dhan. Waxa layaabka leh ee ku saabsan Coosa waa rabitaankeeda ah inay saaxiib la noqoto. Markay tahay waqtiga quudinta fardaha, way salaamaysaa markay u ordaan meheradaha markaas ayay ku jiifsataa cawska iyada oo la cunaysa cawska halka aan ka qabanayo shaqooyinka maqsinnada.
'Coosa waa mid aad u faraxsan oo firfircoon. Ma aqaano haddii aan maamuli lahaa iyada haddii aysan ahaan lahayn Cesar iyo tababarkiisa aniga iyo eeyga! Waa inaan ku daro hal sheeko oo yar. Markii ay Coosa jirtay 9 bilood, waxaan ku haystay iyada oo ku jirta dukaan lagu iibiyo cunnada eyda, bisadda iyo faraska. Ey kale ayaa la soo galay milkiilihiisii ​​intii aan halkaa joognay. Waxaan moodayay inaan fiirinayo mataantii Coosa !! Waxaan u tegey milkiilayaasha oo aan kala hadlay eydooda. Mojo wuxuu jiray 9 bilood waxayna ahayd wax iska cad eeyahayagu inay ka yimaadeen isla qashinka. Tani waa beel yar oo ka kooban 16,000 oo qof oo ku nool guud ahaan gobolka weyn. Mojo ayaa ka maqnaa a qashin sagaal cunug ah . Hooyadu waxay ahayd Rottweiler , aabe wuxuu ahaa St Bernard . Taranka wuxuu ahaa mid shil ah, labada waalidba waxay ahaayeen kuwo saafi ah. Labada eyna waxay lahaayeen shakhsiyaad isku mid ah. '
St Bernard / Rottweiler isku dhafka eeyaha yar ee 7 ½ toddobaad jira
Rouge eeyga yar ee loo yaqaan 'St Weiler' ee jira 7 toddobaad
Rouge saddexda midab leh ee St. Weiler (Rottweiler / Saint Bernard ey iskudhaf ah) markay 3 sano jiraan
Kiya the Saint Weiler oo ah ey 4 bilood jir ah— Aad ayey u fududahay in la tababaro wayna ogtahay amarrada aasaasiga ah sida fadhi, rux, jiifso, rogrogmada, hadalka iyo kaalay. Saaxiibkay ayaa Kiya u qaatay socod dheer beerta nasashada dhowr jeer usbuucii waxaanan leenahay daarad weyn oo runtii ay ku sii deyn karto. Waxaan jecel nahay inaan aragno iyada oo ordaya maxaa yeelay aad ayey u kacsan tahay waxayna leedahay xariiqan cajiibka ah ee timaha oo si toos ah dhabarka ugu taagan. Kiya waa gabadhayda weyn ee aan jeclahay iyada! '
Kiya Saint Weiler oo ah eey
Eeg tusaalooyin badan oo ka mid ah St. Weiler
Sawirada St. Weiler
Jack Russell rat isku darka Pit sirdoonka
Boqor corso pitbull qas muqisho
cavalier king charles isbaanish dachshund mix
isku darka dogue de bordeaux pitbull
shaybaarka labka sawirro isku dhafan
4 muqisho shaybaarka bil jir
faransiiska bulldog pitbull qas puppy